अब पनि लकडाउन नै ? - नेपालबहस
गृहपृष्ठ फीचर्ड (ट्रेन्डिङ) अब पनि लकडाउन नै ?
जेठ २० पछि पनि यस्तै लकडाउन भैरहला त ? धेरैको जिज्ञाशा छ । नेपाली जनताले करिब अढाई महिनाको लकडाउन झेलिसके । यस अवधिमा नागरिक तहबाट लकडाउनको पालना इमान्दारीपूर्वक भएको छ । नागरिक तहबाट लकडाउनको पालना कडीकडाउका साथ भएपनि दिनहुँ कोरोना संक्रमण बढ्दो छ ।
अब त दैनिक जसो सयभन्दा बढी मानिस कोरोना संक्रमित भएका खबर आउन थालेका छन् । तर राजनीतिक तहमा भने यो लकडाउनले केही फरक पारेको छैन । पार्टीका मिटिङ निर्बाध भएकै छन् । बालुवाटार जानेहरुलाई कतै छेकबार छैन । यति हुँदा पनि कोरोना रोकथामका लागि आशालाग्दो कुनै काम सरकारले गरेको छैन । कहिले अध्यादेश काण्डमा देशलाई फसाएर नेताहरु रमिते भएका छन्, तर अहिले लिपुलेक प्रकरणबाट सत्ताको राजनीति थालिएको छ ।
कोरोनासँग लड्न लकडाउन एउटा राम्रो हतियार हो भन्ने चीनले नै प्रमाणित गरिदियो । त्यसको सिको गरेर नेपालमा पनि लकडाउन गरियो । चीनले लकडाउनसँगै कोरोना विरुद्ध धेरै खाले प्रभावकारी कदम चाल्यो । लकडाउनका बीच उसले धेरै भन्दा धेरै मानिसलाई परीक्षण ग¥यो । जसले गर्दा संक्रमितहरुले धेरै फैलाउन पाएनन् । तर नेपालमा भने लकडाउन गरेर नेताहरु सत्ता राजनीतिमा होमिए ।
जसले गर्दा कोरोना संक्रमण अझै फैलियो । संभावित संक्रमितलाई अलग राख्न तयार गरिएका क्वारेण्टिन कोरोना सुपर स्प्रेडर एरिया पो बन्न पुग्यो । बाँकेको नरैनापुरस्थित क्वारेण्टिन नै कोरोना उत्पादन क्षेत्र बन्न पुग्यो । सरकारले तयार गरेका क्वारेण्टिनस्थलमा न्यूनतम आवश्यकताका सामग्रीसमेत अभाव छ । पौष्टिक आहारको त कुरै छाडौं, सामान्य तातोपानी वा सिटामोलको समेत व्यवस्था गरिएको छैन । झण्डै साढे दुई अर्ब रुपियाँ कोरोना कोषमा जम्मा भइसकेको छ । उक्त रकम सरकारले कहिले र कसका लागि खर्च गर्न साँचेको हो ?
यो पृष्ठभूमिमा धेरैलाई लागेको छ– सरकारले फेरि पनि लकडाउन थप्छ । लकडाउन थप्नका लागि सरकारलाई धेरै बहाना चाहिएको छैन । मात्र एउटा भए काफी छ– लिपुलेक प्रकरण । लिपुलेक प्रकरणमा अभूतपूर्व एकता देखियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार यो मामलामा खासै गम्भिर नदेखिएपनि नक्सा सार्वजनिक गरेर फेरि पनि राष्ट्रवादको नक्कली भ्रम छर्न सफल भएको छ । पार्टी भित्रको द्वन्द्वबाट बच्न र एमसीसी प्रकरणलाई सहज बनाउन ओलीले भारतसँग देखावटी नै सही प्रतिकार गर्न खोजे । यसबाट ओलीलाई दुईवटा लाभ प्रत्यक्ष रुपमा पुग्ने देखिन्छ । पहिलो भनेको पार्टीभित्रको मतभेद तत्कालका लागि थाँती राख्न र दोस्रो चाहिं एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्न बाटो खोल्ने । नभन्दै परिस्थिति त्यही दिशामा उन्मुख भएको छ ।
लकडाउन अब भने सामान्य नेपालीका लागि थेग्नै नसक्ने बोझ भइसकेको छ । हुनेखाने र पहुँचवालाका लागि लकडाउनको कुनै असर र प्रभाव नहोला । तर श्रमजीवी मजदूर, किसान र साना उद्यमी व्यावसायीका लागि अब लकडाउन अभिशाप बनेको छ । लामोसमय व्यापार व्यावसाय ठप्प हुँदा कतिपयको त भात भान्सा नै बन्द हुने अवस्था छ । निम्न मध्यम वर्गलाई यो लकडाउन सबैभन्दा ठूलो बिडम्बना बन्न पुगेको छ । यो वर्ग अरुसँग राहत माग्न पनि नसक्ने, भएको पनि रित्तिसकेको अवस्थामा छन् ।
नेपालमा यो वर्ग सबैभन्दा बढी र प्रभावशाली रहेको छ । त्यसैले यो वर्ग भोलि सडकमा ओर्लने अवस्था आयो भने ओली सरकारका लागि नराम्रो प्रहार हुने छ । त्यसैले अबको जनजीवन कोरोनासँग लड्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यसका लागि सरकारले राम्रो होम वर्क गरेर अग्रसर हुनु आवश्यक छ । अन्यथा, ओली शासनको पतन कसैले नगरे यही वर्गले गर्नेछन् । समयमै बिचार गरौं । चेतना भया ।
अघिल्लो लेखमाफी माग्न ऐन महरलाई अखिल क्रान्तिकारीको निर्देशन, सत्ताको ध्वाँस र दम्भ नदेखाउन चेतावनी
अर्को लेखकपिलवस्तुमा नर्ससहित ११ जना कोरोनामुक्त